Semalt: Grepsr - Anokurumidza Chrome Extension Platform
Grepsr data kubva mumambure. Inotarisa kune vasiri vashandisi vese vanoda kubhadhara premium kuitira kuti data yavo iungane uye irongedzwe nenzira yakarongeka. Iyi webhupu yezvigadziriswa zvishandiso inopa zvinotevera kune vashandisi vayo:
Chengetedza Nguva Nesimba
Vashandi vanogona kubvisa nhamba ye data kubva pamapeji akasiyana-siyana ewebhu pasina kushandiswa zvakaoma software tools. Vanongofanira kurongedza kalendari yavo nguva dzose yekuchera mabasa. Icho chiri nyore chekugadzira software software ne user-friendly interface iyo inonzwisisika kune vashandisi vekambani - good vacation spots in south america. Nhasi vashambadzi vakawanda vanoshandisa purogiramu iyi kuti vape migumisiro yakanaka yekambani dzavo. Grepsr inovimbiswa kuvapa iyo data yakakodzera chero nguva yavanoda.
Zvishandiso Zvishandiso Zvinobudirira uye Mabasa Akashandurwa
Grepsr anoshandisa zvimwe zvishandiso zvinoshamisa, pamwe nekusigirwa kukuru nekubatanidzwa. Somugumisiro, inopa chikwata chakareruka kune vashandisi vayo, vanoda kutsvaga zvishandiso zvakakosha kuti vabvise chero chinhu kubva mumambure. Semuenzaniso, iyi purogiramu yepurogiramu inobatanidza neB2B data, yakadai semitengo yemiti, mazita ematokisi, mazita, pamwe nebhizimisi vanobatana.
Ipai Vashandi neChirongwa Chisingakoshi Chekutsigira
Haisi nguva dzose basa rakaoma rekutsvaga webhutori kubvisa zvose zvavanoda. Semuenzaniso, kana vari kuedza kuunganidza mitengo yemamwe mashizha kubva pamapeji ewebhu uye webhusaiti inoshandura sarudzo yaro, kubvisa kwavakaita kunoda kudzokorora. Iri ibasa rinogona kuitwa nenyanzvi dzeGrespr dzisina mari yakawedzerwa.
Ndiani Anoshandisa Iri Scraping Software Program
Kune makambani akawanda emusika unoda kuwana nekugadzira data yavo yewebhu, zvakadai semasangano makuru uye vatengesi. Vose vari vaviri vanoda nguva dzose kushandira deta uye nyanzvi dzeGrpsr dzinogona kuvabatsira. Uyezve, zvikwata zviduku zvingadawo kuti rubatsiro kunyorera nekubatanidza data kubva pawebhu zvakananga.
Gadzira Zvirongwa neGrapsr
Apo vashandisi vanogadzira chimwe chirojekiti, iyi shanduro yepurogiramu inovatsanangurira uye inodzosera kune vashandi vhidhiyo chaiyo (mutengo). Kana imwe nguva mutengo wawakagadzirirwa, dhidhadha ye data yakasikwa, uye dambudziko rekuunganidza dambudziko rinotanga. Tsvakurudzo dzeWebhu dzinoziviswa neGritsr vatsigiri kuburikidza nezaziso zvepurogiramu kana ma-mail.
Iyi software yekushandiswa kwepurogiramu inoshandisa chikwata chechikwata, saka vashandi vanogona kuva nechokwadi chokuti ruzivo rwavo rose rwakachengeteka. Uyezve, vanoda kuziva kuti chero nguva yavanenge vachida, vanogona kuva nekutonga kwakakwana kwedhesi ravo.